Graphene dia fitaovana vaovao izay hanova ny toetrantsika ny fitafiantsika.
Voatonona tao amin'ny lahatsoratray momba ny lamba vaovao, ny graphene dia mitohy miteraka savorovoro. Ary noho ny antony tsara. Hitan'ny mpikaroka roa avy amin'ny University of Manchester, André Geim sy Konstantin Novoselov, tamin'ny 2004, ary nahazo ny loka Nobel ho an'ny fizika tamin'ny 2010, ity fitaovana vaovao mbola tsy nisy toa azy ity dia mirehareha endrika miavaka.
Maka ny endrik'ireo atômôna karbaona tokana voalamina ao anaty tantely tantely, tonga amin'ny endrika madio ny graphene, tsy misy additives na simia. Voalamina ao anaty ravina miforitra akordonaly, ny velarany fisaka sy mivelatra ary ny toetrany mafana sy herinaratra dia mahatonga azy ho kandidà mirindra amin'ny fampidirana lamba, ho fanampin'ny fampiasana azy eo amin'ny tontolo iainana, satria ny graphene dia mifoka hidrokarbona sy fitaovana organika.
Graphene dia azo faritana ho toy ny atody iray matevina grafita. Izy io dia singa fototra ifotoran'ny alotropes hafa, ao anatin'izany ny grafite, arina, nanotube karbonika ary fullerenes. Izy io koa dia azo raisina ho molekiola manitra lehibe tsy manam-petra, ny tranga mametra ny fianakavian'ny hydrocarbons aromatika polycyclic fisaka. Ny fikarohana Graphene dia nivelatra haingana hatramin'ny nanokanana voalohany ilay zavatra tamin'ny 2004. Ny fikarohana dia nampahafantarina tamin'ny famaritana teolojika momba ny firafitr'i graphene, ny rafitr'izy ireo ary ny fananany, izay nisaina am-polony taona maro talohan'izay. Ny graphene avo lenta koa dia nahagaga fa mora ny mitoka-monina, ka azo atao ny manao fikarohana bebe kokoa. Andre Geim sy Konstantin Novoselov ao amin'ny University of Manchester dia nahazo ny loka Nobel momba ny fizika tamin'ny taona 2010 "noho ny fanandramana namaky momba ny graphene ara-pitaovana roa lafiny.
Ny lamba rakotra graphene dia azo tamin'ny fampihenana simika ny graphene oxide. Ny fitantanana lamba dia azo avy amin'ny firakofana graphene. Ny spectroscopy amin'ny herinaratra elektrokimika dia naneho ny fitondran-tena amin'ny lamba. Ny tahan'ny scanner dia masontsivana iray lehibe amin'ny famaritana ny voltammetry amin'ny bisikileta. Ny mikraoskaopy electrochemical scanning dia naneho ny fitomboan'ny electroactivity.